Air Con oယ်မယ်ဆို သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ - Thutazone
Air Con oယ်မယ်ဆို သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
1. Cooling Capacity (Btu/hr)
Air Con တစ်လုံးရဲ့  အေးနိုင်စွမ်း(Cooling Capacity) ကို Btu per hour(Btu/hr) ဒါမှမဟုတ် kilo Watt(kW) နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ 1Btu ဆိုတာ 1pound ရှိတဲ့ ရေကို Temperature 1’Fahrenheit(F) တိုးစေဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အပူပမာဏပါ။ P(kW) = P(Btu/hr) / 3412.142
Btu/hr များလာတဲ့အလျောက် Air Con ရဲ့ဈေးနှုန်းကလဲလိုက်ပြီး များလာမှာပါ။
Horsepower(hp) က အအေးနှုန်းကို တိုင်းတဲ့ unit မဟုတ်ပါဘူး။
hp က Air Con compressor ကို မောင်းတဲ့ electric motor ရဲ့ Rotational Power ကိုသာ ညွှန်းဆိုတာပါ။
1hp ရှိတဲ့ Air Con မှာ နည်းပညာပိုမြင့်မားလာလေ Cooling Capacity ပိုများလာလေပါ။
နိုင်ငံတကာမှာလဲ Air Con ရောင်းရင် Btu/hr နဲ့သာ ဖော်ပြပြီး ရောင်းချကြပါတယ်။
မိမိအခန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ Btu/hr ကို “အကြမ်းဖျင်း” တွက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တွက်နည်းများစွာ ရှိတဲ့ထဲကမှ လွယ်ကူမယ့် “အကြမ်းဖျင်း” တွက်နည်းတစ်ခုပါ။
မိမိ သုံးမယ့်အခန်းရဲ့ အလျား x အနံ square feet ကို 35 နဲ့ မြှောက်ပါ။ ရလာတဲ့အဖြေက မိမိ အခန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ Btu/hr ပါပဲ။
ဥပမာ 12 ပေx 15 ပေ အခန်းဆိုရင် square feet က 180 ပါ။ 180 x 35 = 6300 Btu ခန့် လိုအပ်ပါတယ်။
အရိပ်ကျတဲ့အခန်းမှာဆို ရလာတဲ့ Btu/hr ကို 10% နှုတ်ပါ။
နေရောင်တိုက်ရိုက်ကျတဲ့ အခန်းမှာဆို ရလာတဲ့ Btu/hr ကို 10% ထပ်ပေါင်းပေးပါ။
မီးဖိုချောင်မှာ သုံးမယ်ဆိုရင် ရလာတဲ့ Btu/hr ကို 4000 ခန့် ထပ်ပေါင်းပေးပါ။
အခန်းထဲမှာ လူ ၁ ယောက်ထပ် ပိုနေမယ်ဆိုရင် အခန်းဧရိယာအတွက် တွက်ထားတဲ့ Btu/hr အပြင် လူတစ်ဦးအတွက်ကို 600 Btu/hr ခန့်စီ ထပ်ပေါင်းပေးပါ။
Toshiba ၁ကောင်မှာ 8500Btu/hr ၊ ၁ကောင်ခွဲမှာ 11600Btu/hr ၊၂ကောင်မှာ 16400Btu/hr ၊ ၂ကောင်ခွဲမှာ 21900Btu/hr အပူဖလှယ်နိုင်ပါတယ်။
Toshiba Inverter ၁ကောင်မှာ 3753 မှ 10236Btu/hr ထိ ၊ ၁ကောင်ခွဲမှာ 3753 မှ 13648Btu/hr ထိ ၊ ၂ကောင်မှာ 3753 မှ 20472Btu/hr ထိ compressor speed ပေါ်မူတည်ပြီး အပူဖလှယ်နိုင်ပါတယ်။
EER ဆိုတာ Cooling Capacity(Btu/hr) ကို သုံးစွဲတဲ့ မီးအား Power Consumption(Watt) နဲ့ စားထားတဲ့ အချိုးပါ။
EER များတဲ့ Air Con တွေက ရေရှည်မှာ မီတာခ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာပါတယ်။
EER များလာရင် Air Con ဈေးလဲ လိုက်များလာပါတယ်။
Air Con အများစုကတော့ EER 8.9 ကနေ 10.7 ကြားမှာ ရှိကြပါတယ်။
Inverter type တွေမှာဆို EER 12 ကနေ 20 ဝန်းကျင် ရှိကြပါတယ်။
24 နာရီ7ရက်လုံး ဆက်တိုက် အချိန်ကြာကြာ သုံးရမယ့်နေရာမျိုးမှာဆို EER မြင့်တဲ့ Air Con ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
မီးအားသုံးစွဲတဲ့ Watt(W) ကို လိုချင်ရင် Btu/hr ကို EER နဲ့ စားပါ။
Toshiba ၁ကောင်မှာ EER 10.12 ၊ ၁ကောင်ခွဲမှာ EER 9.35 ၊ ၂ကောင်မှာ EER 9.11 ၊ ၂ကောင်ခွဲမှာ EER10.5 ရှိပါတယ်။
Toshiba Inverter ၁ကောင်မှာ EER 14.7 မှ 10.6 ထိ ၊ ၁ကောင်ခွဲမှာ EER 15 မှ 10.2 ထိ ၊ ၂ကောင်မှာ EER 20.8 မှ 10.2 ထိ ရှိပါတယ်။
3. Air Flow Rate
Indoor unit က ထွက်တဲ့ လေထွက်နှုန်း ကို cubic meter per hour (m³/h) နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ လေထွက်နှုန်းများလေ အအေးမြန်လေပါ။
Toshiba ၁ကောင်မှာ 540m³/h, ၁ကောင်ခွဲမှာ 600m³/h, ၂ကောင်မှာ 900m³/h, ၂ကောင်ခွဲမှာ 1100m³/h ထွက်ရှိပါတယ်။
ဆူညံမှုဆိုတဲ့နေရာမှာ indoor unit နဲ့ outdoor unit ရဲ့ဆူညံမှုဆိုပြီး ၂ မျိုး ရှိပါတယ်။
Indoor unit ရဲ့ ပန်ကာက တော်တော်ဆူညံနေတယ်ဆိုရင် သင်ညအိပ်ရင် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေမှာပါ။
Outdoor unit ကလည်း ပြတင်းပေါက်နဲ့ နီးပြီး အသံကျယ်နေမယ်ဆိုရင် အတွင်းကပင် ဆူညံသံကို ကြားနေရနိုင်ပါတယ်။
ဆူညံမှုကို decibel(dB) နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ dB များလေ အသံပိုကျယ်လေပါ။
5. Inverter Type ၀ယ်မှာလား Non-Inverter Type ၀ယ်မှာလား
-Non-Inverter Type Air Con (Fixed Compressor Speed)
Non-Inverter type Air Con ရဲ့compressor က သူ့ရဲ့ maximum speed တစ်မျိုးတည်းနဲ့ အလုပ်လုပ်တာပါ။ အလုံပိတ်အခန်းမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အပူချိန်ကို ရောက်ပြီဆိုရင် compressor ခဏ ရပ်သွားပါတယ်။ အပူချိန် အနည်းငယ်ပြန်တက်လာပြီဆိုရင် compressor က သူ့ရဲ့အများဆုံး speed တစ်မျိုးတည်း နဲ့ပဲ ပြန်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် အခန်းအပူချိန်ကို ထိန်းပေးပါတယ်။ Non-Inverter မှာ compressor ရပ်လိုက် ဖွင့်လိုက် လုပ်တဲ့အတွက် အပူချိန် အတက်အကျ ပိုသိသာပါတယ်။
-Inverter Type Air Con (Variable Compressor Speed)
Inverter Type Air Con ရဲ့ compressor က speed အမျိုးအမျိုးနဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူက compressor ကို ရပ်မပစ်ပါဘူး။ Speed အတိုးအလျှော့လုပ်ခြင်းဖြင့် အခန်း အပူချိန်ကို ထိန်းပေးတာပါ။Inverter Type Air Con က Non-Inverter Type Air Con ထက် လျှပ်စစ်မီတာခ 30% ကနေ 50% ထိ (Brand နဲ့ Model ပေါ် မူတည်ပြီး) သက်သာစေပါတယ်။ Inverter Type Air Con က စဖွင့်ဖွင့်ခြင်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အပူချိန်ကို ပိုမြန်မြန် ရရှိစေပါတယ်။Inverter Type Air Con က အခန်းတွင်းအပူချိန် အတက်အကျ နည်းစေပါတယ်။
ဥပမာ Non-Inverter Type Air Con သုံးလို့ Air Con သီးသန့်အတွက် တစ်လစာ မီတာခ 10,000 ကျပ် ကျသင့်မယ်ဆိုရင် Inverter Type Air Con သုံးမယ်ဆို 5000 နဲ့ 7000 ကျပ် ကြားပဲ ကျသင့်မှာပါ။
6. Refrigerant Type
Air Con outdoor unit ထဲမှာနဲ့ ကြေးပိုက်စနစ်ထဲမှာ သုံးတဲ့ Gas ပါ။ အမျိုးအစားကွဲအများကြီး ရှိပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာ အသုံးများတာကတော့ R22 hydro-chlorofluorocarbon (HCFC) နဲ့ R410A hydro-fluorocarbon (HFC) ပါ။
R410A က အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် R22 သုံးတာထက် ပိုများတဲ့ pressure လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် R410A သုံးတဲ့ Air Con မှာ ကြေးပိုက် ပိုထူတာ သုံးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ R410A သုံးရင် တပ်ဆင်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က R22 သုံးတာထက် ပိုများပါတယ်။ R22 ကတော့ Ozone လွှာကို ပျက်စီးစေတဲ့ Gas အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး R410A ကတော့ Ozone လွှာကို မပျက်စီးစေပါဘူး။
Toshiba Inverter Type မှာတော့ R410A သုံးပြီး Non-Inverter Type မှာတော့ R22 သုံးပါတယ်။
7. Copper Pipe Quality
Air Con မှာ Outdoor unit ထဲမှာရော Indoor unit ထဲမှာရော ၂ခုကို ဆက်ပေးထားတဲ့ ပိုက်မှာရော ကြေးနီကို အသုံးပြုရပါတယ်။ တကယ်လို့ သုံးထားတဲ့ ကြေးနီက မစစ်ရင်တော့ Compressor ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း full quality အအေးကို မရရှိနိုင်ပါဘူး။ တစ်ချို့ Air Con တွေမှာ ကြေးနီ အစား အလူမီနီယမ် သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ် ကြေး နှစ်မျိုး ရောစပ်ပြီး သုံးထားပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းဝယ်စရိတ်မှာ ကြေးက ၂ဆ ပိုကုန်ကျပါတယ်။ နောက်ပြီး ကြေးက အလူမီနီယမ်ထက် ပွတ်တိုက်စားနှုန်း ပိုခံနိုင်ပါတယ်။ အပူချိန် ပြောင်းလဲပေးတဲ့ အမြန်နှုန်းမှာလဲ ကြေးက ၂ဆ ပိုမြန်စွာ ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်ပါတယ်။ Air Con ဘယ်လောက်ကောင်းတာပဲ ၀ယ်ဝယ် ကြေးပိုက် စနစ်မှာ ချို့ယွင်းနေရင်တော့ အလကားဖြစ်သွားမှာပါ။
Via : Toshiba AirCon
Air Con oယျမယျဆို သိထားသငျ့တဲ့ အခကျြမြား (unicode)
Air Con တဈလုံးရဲ့ အေးနိုငျစှမျး(Cooling Capacity) ကို Btu per hour(Btu/hr) ဒါမှမဟုတျ kilo Watt(kW) နဲ့ တိုငျးတာပါတယျ။ 1Btu ဆိုတာ 1pound ရှိတဲ့ ရကေို Temperature 1’Fahrenheit(F) တိုးစဖေို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ အပူပမာဏပါ။ P(kW) = P(Btu/hr) / 3412.142
Btu/hr မြားလာတဲ့အလြောကျ Air Con ရဲ့ဈေးနှုနျးကလဲလိုကျပွီး မြားလာမှာပါ။
Horsepower(hp) က အအေးနှုနျးကို တိုငျးတဲ့ unit မဟုတျပါဘူး။
hp က Air Con compressor ကို မောငျးတဲ့ electric motor ရဲ့ Rotational Power ကိုသာ ညှနျးဆိုတာပါ။
1hp ရှိတဲ့ Air Con မှာ နညျးပညာပိုမွငျ့မားလာလေ Cooling Capacity ပိုမြားလာလပေါ။
နိုငျငံတကာမှာလဲ Air Con ရောငျးရငျ Btu/hr နဲ့သာ ဖျောပွပွီး ရောငျးခကြွပါတယျ။
မိမိအခနျးအတှကျ လိုအပျတဲ့ Btu/hr ကို “အကွမျးဖငျြး” တှကျကွညျ့နိုငျပါတယျ။ တှကျနညျးမြားစှာ ရှိတဲ့ထဲကမှ လှယျကူမယျ့ “အကွမျးဖငျြး” တှကျနညျးတဈခုပါ။
မိမိ သုံးမယျ့အခနျးရဲ့ အလြား x အနံ square feet ကို 35 နဲ့ မွှောကျပါ။ ရလာတဲ့အဖွကေ မိမိ အခနျးအတှကျ လိုအပျတဲ့ Btu/hr ပါပဲ။
ဥပမာ 12 ပေx 15 ပေ အခနျးဆိုရငျ square feet က 180 ပါ။ 180 x 35 = 6300 Btu ခနျ့ လိုအပျပါတယျ။
အရိပျကတြဲ့အခနျးမှာဆို ရလာတဲ့ Btu/hr ကို 10% နှုတျပါ။
နရေောငျတိုကျရိုကျကတြဲ့ အခနျးမှာဆို ရလာတဲ့ Btu/hr ကို 10% ထပျပေါငျးပေးပါ။
မီးဖိုခြောငျမှာ သုံးမယျဆိုရငျ ရလာတဲ့ Btu/hr ကို 4000 ခနျ့ ထပျပေါငျးပေးပါ။
အခနျးထဲမှာ လူ ၁ ယောကျထပျ ပိုနမေယျဆိုရငျ အခနျးဧရိယာအတှကျ တှကျထားတဲ့ Btu/hr အပွငျ လူတဈဦးအတှကျကို 600 Btu/hr ခနျ့စီ ထပျပေါငျးပေးပါ။
Toshiba ၁ကောငျမှာ 8500Btu/hr ၊ ၁ကောငျခှဲမှာ 11600Btu/hr ၊၂ကောငျမှာ 16400Btu/hr ၊ ၂ကောငျခှဲမှာ 21900Btu/hr အပူဖလှယျနိုငျပါတယျ။
Toshiba Inverter ၁ကောငျမှာ 3753 မှ 10236Btu/hr ထိ ၊ ၁ကောငျခှဲမှာ 3753 မှ 13648Btu/hr ထိ ၊ ၂ကောငျမှာ 3753 မှ 20472Btu/hr ထိ compressor speed ပျေါမူတညျပွီး အပူဖလှယျနိုငျပါတယျ။
EER ဆိုတာ Cooling Capacity(Btu/hr) ကို သုံးစှဲတဲ့ မီးအား Power Consumption(Watt) နဲ့ စားထားတဲ့ အခြိုးပါ။
EER မြားတဲ့ Air Con တှကေ ရရှေညျမှာ မီတာခ ကုနျကစြရိတျ သကျသာပါတယျ။
EER မြားလာရငျ Air Con ဈေးလဲ လိုကျမြားလာပါတယျ။
Air Con အမြားစုကတော့ EER 8.9 ကနေ 10.7 ကွားမှာ ရှိကွပါတယျ။
Inverter type တှမှောဆို EER 12 ကနေ 20 ဝနျးကငျြ ရှိကွပါတယျ။
24 နာရီ7ရကျလုံး ဆကျတိုကျ အခြိနျကွာကွာ သုံးရမယျ့နရောမြိုးမှာဆို EER မွငျ့တဲ့ Air Con ကို ရှေးခယျြဝယျယူသငျ့ပါတယျ။
မီးအားသုံးစှဲတဲ့ Watt(W) ကို လိုခငျြရငျ Btu/hr ကို EER နဲ့ စားပါ။
Toshiba ၁ကောငျမှာ EER 10.12 ၊ ၁ကောငျခှဲမှာ EER 9.35 ၊ ၂ကောငျမှာ EER 9.11 ၊ ၂ကောငျခှဲမှာ EER10.5 ရှိပါတယျ။
Toshiba Inverter ၁ကောငျမှာ EER 14.7 မှ 10.6 ထိ ၊ ၁ကောငျခှဲမှာ EER 15 မှ 10.2 ထိ ၊ ၂ကောငျမှာ EER 20.8 မှ 10.2 ထိ ရှိပါတယျ။
Indoor unit က ထှကျတဲ့ လထှေကျနှုနျး ကို cubic meter per hour (m³/h) နဲ့ တိုငျးတာပါတယျ။ လထှေကျနှုနျးမြားလေ အအေးမွနျလပေါ။
Toshiba ၁ကောငျမှာ 540m³/h, ၁ကောငျခှဲမှာ 600m³/h, ၂ကောငျမှာ 900m³/h, ၂ကောငျခှဲမှာ 1100m³/h ထှကျရှိပါတယျ။
ဆူညံမှုဆိုတဲ့နရောမှာ indoor unit နဲ့ outdoor unit ရဲ့ဆူညံမှုဆိုပွီး ၂ မြိုး ရှိပါတယျ။
Indoor unit ရဲ့ ပနျကာက တျောတျောဆူညံနတေယျဆိုရငျ သငျညအိပျရငျ အနှောငျ့အယှကျ ဖွဈနမှောပါ။
Outdoor unit ကလညျး ပွတငျးပေါကျနဲ့ နီးပွီး အသံကယျြနမေယျဆိုရငျ အတှငျးကပငျ ဆူညံသံကို ကွားနရေနိုငျပါတယျ။
ဆူညံမှုကို decibel(dB) နဲ့ တိုငျးတာပါတယျ။ dB မြားလေ အသံပိုကယျြလပေါ။
5. Inverter Type ဝယျမှာလား Non-Inverter Type ဝယျမှာလား
Non-Inverter type Air Con ရဲ့compressor က သူ့ရဲ့ maximum speed တဈမြိုးတညျးနဲ့ အလုပျလုပျတာပါ။ အလုံပိတျအခနျးမှာ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ အပူခြိနျကို ရောကျပွီဆိုရငျ compressor ခဏ ရပျသှားပါတယျ။ အပူခြိနျ အနညျးငယျပွနျတကျလာပွီဆိုရငျ compressor က သူ့ရဲ့အမြားဆုံး speed တဈမြိုးတညျး နဲ့ပဲ ပွနျအလုပျလုပျခွငျးဖွငျ့ အခနျးအပူခြိနျကို ထိနျးပေးပါတယျ။ Non-Inverter မှာ compressor ရပျလိုကျ ဖှငျ့လိုကျ လုပျတဲ့အတှကျ အပူခြိနျ အတကျအကြ ပိုသိသာပါတယျ။
Inverter Type Air Con ရဲ့ compressor က speed အမြိုးအမြိုးနဲ့ အလုပျလုပျနိုငျပါတယျ။ သူက compressor ကို ရပျမပဈပါဘူး။ Speed အတိုးအလြှော့လုပျခွငျးဖွငျ့ အခနျး အပူခြိနျကို ထိနျးပေးတာပါ။Inverter Type Air Con က Non-Inverter Type Air Con ထကျ လြှပျစဈမီတာခ 30% ကနေ 50% ထိ (Brand နဲ့ Model ပျေါ မူတညျပွီး) သကျသာစပေါတယျ။ Inverter Type Air Con က စဖှငျ့ဖှငျ့ခွငျး ကိုယျလိုခငျြတဲ့ အပူခြိနျကို ပိုမွနျမွနျ ရရှိစပေါတယျ။Inverter Type Air Con က အခနျးတှငျးအပူခြိနျ အတကျအကြ နညျးစပေါတယျ။
ဥပမာ Non-Inverter Type Air Con သုံးလို့ Air Con သီးသနျ့အတှကျ တဈလစာ မီတာခ 10,000 ကပျြ ကသြငျ့မယျဆိုရငျ Inverter Type Air Con သုံးမယျဆို 5000 နဲ့ 7000 ကပျြ ကွားပဲ ကသြငျ့မှာပါ။
Air Con outdoor unit ထဲမှာနဲ့ ကွေးပိုကျစနဈထဲမှာ သုံးတဲ့ Gas ပါ။ အမြိုးအစားကှဲအမြားကွီး ရှိပါတယျ။ ဈေးကှကျထဲမှာ အသုံးမြားတာကတော့ R22 hydro-chlorofluorocarbon (HCFC) နဲ့ R410A hydro-fluorocarbon (HFC) ပါ။
R410A က အလုပျလုပျဖို့အတှကျ R22 သုံးတာထကျ ပိုမြားတဲ့ pressure လိုအပျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ R410A သုံးတဲ့ Air Con မှာ ကွေးပိုကျ ပိုထူတာ သုံးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ R410A သုံးရငျ တပျဆငျတဲ့ ကုနျကစြရိတျက R22 သုံးတာထကျ ပိုမြားပါတယျ။ R22 ကတော့ Ozone လှာကို ပကျြစီးစတေဲ့ Gas အမြိုးအစားဖွဈပွီး R410A ကတော့ Ozone လှာကို မပကျြစီးစပေါဘူး။
Toshiba Inverter Type မှာတော့ R410A သုံးပွီး Non-Inverter Type မှာတော့ R22 သုံးပါတယျ။
Air Con မှာ Outdoor unit ထဲမှာရော Indoor unit ထဲမှာရော ၂ခုကို ဆကျပေးထားတဲ့ ပိုကျမှာရော ကွေးနီကို အသုံးပွုရပါတယျ။ တကယျလို့ သုံးထားတဲ့ ကွေးနီက မစဈရငျတော့ Compressor ဘယျလောကျကောငျးကောငျး full quality အအေးကို မရရှိနိုငျပါဘူး။ တဈခြို့ Air Con တှမှော ကွေးနီ အစား အလူမီနီယမျ သို့မဟုတျ အလူမီနီယမျ ကွေး နှဈမြိုး ရောစပျပွီး သုံးထားပါတယျ။ ကုနျကွမျးဝယျစရိတျမှာ ကွေးက ၂ဆ ပိုကုနျကပြါတယျ။ နောကျပွီး ကွေးက အလူမီနီယမျထကျ ပှတျတိုကျစားနှုနျး ပိုခံနိုငျပါတယျ။ အပူခြိနျ ပွောငျးလဲပေးတဲ့ အမွနျနှုနျးမှာလဲ ကွေးက ၂ဆ ပိုမွနျစှာ ပွောငျးလဲ ပေးနိုငျပါတယျ။ Air Con ဘယျလောကျကောငျးတာပဲ ဝယျဝယျ ကွေးပိုကျ စနဈမှာ ခြို့ယှငျးနရေငျတော့ အလကားဖွဈသှားမှာပါ။
Previous post ငွေနည်းနည်းနဲ့ အလုပ်စလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းရှစ်ခု
Next post လေယာဉ်ပျံပေါ်ဘာကြောင့်ပြဒါးကိုသယ်ခွင့်မပေးတာလဲ…??